Ovao ny motera fikarohana ao amin'ny Safari amin'ny Leopard | Martech Zone
Ovao ny motera fikarohana ao amin'ny Safari amin'ny Leopard
Alarobia, Jona 17, 2009 Alahady, Aogositra 23, 2009 Douglas Karr
Foana aho mampiasa Safari 4 mandritra ny herinandro na roa. Androany vao tsapako fa tsy afaka manova ny motera fikarohana ao anaty Safari aho. Ugh!
Soa ihany fa misy Glims, fampiharana izay ahafahanao mitantana ny motera fikarohana ataonao ao Safari. Azonao atao ny manampy, manala, manitsy ary manamboatra ireo motera fikarohana tianao. Tsotra tokoa ny mametraka sy manamboatra.
Ampidiro fotsiny ny plugin, avereno indray Safari, ary sokafy Safari> Preferensi. Ao amin'ny kiheba farany no ahitanao ny fikirana ho an'ny Glims.
Tsy tao amin'ny lisitra default i Bing, saingy afaka nanampy izany aho tao anatin'ny minitra vitsy niaraka tamin'ity làlana manaraka ity:
Satria ny ankamaroan'ny rafi-pitantanana atiny dia manana fahaiza-mikaroka ao anatiny, azonao atao koa ny manampy ny tranokalanao manokana. Hitako fa mitady ny tranokalako matetika matetika aho ho an'ireo lahatsoratra taloha nosoratako. Ny tena izy dia manana fahatsiarovana tsara lavitra noho izaho ny bilaogiko!
Ity ny fikirakirana fikarohana ao amin'ny bilaogiko (mifanaraka amin'ny fametrahana WordPress rehetra):
Raha sosotra ianao amin'ny safidin'ny Safari default anao ao anaty Google, apetraho Glims. Raha tena maniry ny hiampita ny renirano ianao ary manelingelina ny heck an'i Steve Jobs, apetraho amin'ny Bing ny motera fikarohana anao. [Hehy ratsy]
Ankafiziko ny famoahana farany an'i Safari ary mankafiziko ny Bing (indrindra ny fomba fitadiavana sary sy horonan-tsary). Fonosiny fonosana tsara izy roa!
Miala tsiny Disqus, mpankafy aho izao!
Jun 18, 2009 ao amin'ny 3: 41 PM
Misaotra anao tamin'ity lahatsoratra ity, izany indrindra no tiako. Tsy hoe te hanala an'i Steve Jobs aho, fa halako ilay biby goavam-be google matavy ary mila safidy aho rehefa mampiasa safari. mamerina ny fisaorana anao.
Jun 21, 2009 ao amin'ny 12: 20 PM
Misy safidy hafa hanovana ny fikarohana default amin'ny milina windows?
Jun 21, 2009 ao amin'ny 11: 23 PM
Salama vitsika - Nanao fikarohana aho ary toa Google na Yahoo ihany no safidy! ao anatin'ny safidin'ny Safari. Antenaina fa hisy hijirika vahaolana tsy ho ela!
Jolay 9, 2009 amin'ny 4:14 PM
indrisy fa tsy mandeha mihitsy ao amin'ny Safari 4.0.x, ny safidy omen'ny Apple anao dia Google sy Yahoo.
Miaraka amin'ny 3.2.3 dia afaka mampiasa motera fikarohana izay nampidirinao tamin'ny alàlan'ny Glims fa tsy intsony
Jolay 9, 2009 amin'ny 4:30 PM
Raha ny marina, tsy izany mihitsy. Mihazakazaka Safari 4 sy Glims aho tsy misy olana amin'ny Leopard. Nalefa tamin'ny BlackBerry Verizon Wireless-ko
Avy amin'ny: IntenseDebate Notifications
Jolay 20, 2009 amin'ny 5:35 PM
Na dia mamitaka aza izany, dia tafahoatra loatra izany ho an'ireo izay te hanova ny milina fikarohana fotsiny. Azoko antoka fa fitaovana tsara i Glims, saingy mampihemotra ahy kely izany rehefa mamerina ny Safari aho ary mahita fa nampiana endri-javatra maro kokoa noho izay azoko isaina.
Nanandrana ny Inquistor ihany koa aho saingy tsy namela ahy hampiditra Bing, Yahoo sy Google fotsiny… na dia mahazo isa bonus aza izy io amin'ny famelana ny fisafidianana ny dikan-teny eo an-toerana. Tsy hainao ny mahakivy ny manandrana mitady valiny Google mety rehefa mipetraka any amin'ny firenena tsy any Etazonia ianao miaraka amin'ny fiteny mahazatra anao napetraka amin'ny zavatra tsy ampiasaina amin'ny Google.com na Google eo an-toerana.
20 Septambra 2009 à 12:29
vaovao amin'ny mac aho, ary tsy maintsy miteny aho - hitako fa tsara ny tetezamita. Rehefa nilaza izany - tsy mamela ny mpampiasa hanova ny milina fikarohana - na farafaharatsiny - na dia ny safidin'ny motera fikarohana azy aza dia fanaraha-maso goavana. Azo antoka fa mora amboarina ihany koa - tsy mila olona misintona add-on fotsiny mba hahazoana endri-javatra izay tena tokony ho nisy teo?
29 Septambra 2009 à 10:31
Fanaraha-maso? Heveriko fa fifanarahana tamin'i Google izany. Miombon-kevitra amin'i Nate aho…Mila zavatra iray hamahana an'ity olana ity aho–mihoatra be ny glims, ary toa tsy hitako izay fomba hamonoana ny zavatra hafa rehetra.
1 Oktobra 2009 à 2:16
Misaotra anao!!!! tsy mihatra intsony ny hevitro etsy ambony. Nila nanakatona ny solosaina aho ary avy eo dia navitrika ny glims. fampiharana tsara. alexandra.
15 Novambra 2009 à 2:40
azonao atao ny manova ny motera fikarohana amin'ny alàlan'ny fanovana ny rakitra azo tanterahana amin'ny terminal mampiasa vi.